कलियुगका कुरा: February 2013
गाउँबाट आएको खवर
'पञ्चायत फालिएपछि नेपाली काँग्रेसको एकमना सरकार हुँदा काँग्रेसी भइकन शिक्षकमा स्थायी भएका थिए, एक जना दाजु । माओवादी शान्ति प्रकियामा प्रवेशसँगै माओवादीका नेता पनि भए, शिक्षक त छँदै थिए ।
अहिले आफ्नै पार्टीको सरकार भएको बेला भनेर खोलाखेतमा तटवन्ध बनाउने भन्दै जिविसबाट ४ लाख रुपैयाँ बुझेछन् । कामै नगरी कर्मचारीसँग मिलेर खर्च फर्स्यौट गरेछन्। गाउँमा खवर आएदेखि मान्छेहरु मुरमुरिएका छन्', गाउँबाट आएका आफन्तलाई खवर सोधेको थिएँ।
लाग्दैन कि बाडुली
माथि माथि आकाशमा सूर्यले खायो जुन
धर्तीमा मैले सकिन कि चिन्न मेरी प्रियतम हुन् कुन
उड्छ सँधै मन मेरो, तैपनि चरी हुन सकिन
रेल झैं दौडी आई तिमीलाई छुन सकिन
गुन्युचोली मिलाउँदै परालमा खेल्थ्यौं लडिबुडी
लाग्दैन कि आजभोलि तिमीलाई सम्झँदा बाडुली
वर्षेझरीले बढ्यो नदी, छैन घाटमा डुँगा
कहाँ छउ तिमी सँगीसँग, केवल छायाँ छ यहाँ।
पुस्तक पसलेको कथा
नारायणघाट शहरको चोकमा पुस्तक पसल थियो। पुस्तकबाट भन्दा भुटुवा-मासु (तास/सेकुवा) पसलबाट धेरै पैसा कमिने देखेपछि पसलेले पुस्तक पसल बेचेर १ किलोमिटर टाढा तास रेष्टुरेन्ट खोलेछन्।
आफूलाई पुस्तक पसल बेच्नेले भुटुवा-मासु पसल राखेर नाफा कमाएको देखेपछि नयाँ पुस्तक पसलेलाई लागेछ - मलाई भाडा तिर्न पनि धौ धौ हुने किताब पसल भिराएर आफूचाहिँ रेष्टुराँ चलाएर पैसा कमाउने।
लउजा भनेर भा'जति पुस्तक नयाँ पसलेले जलाएछन् र त्यहीँ भुटुवा-मासु कै रेष्टुरेन्ट खोलेछन्।
चोकको भुटुवा रेष्टुराँमा नाफा धेरै भएको सुनेपछि पुरानो पुस्तक पसलेले आफूलाई धिक्कारेछ, पहिल्यै मलाई त्यही चोकमा भुटुवा पसले खोल्ने वुद्धि किन आएन?
प्रचण्डलाई कस्तो पार्टनर चाहियो ?
प्रचण्ड - अहिले पनि मलाई गिरिजाप्रसाद जस्तै राजनीतिक पार्टनर चाहिएको छ ।
बाबुराम - हेटौंडा महाधिवेशनपछि हामी (प्रचण्ड र बाबुराम) एकले अर्काबाट छुट्याउन नसक्ने गरी एक भएर आएका छौं।
टिप्पणी : प्रचण्डलाई गिरजाबाबुलाई के दिंदा र'छन् हो, बाबुरामले पार्टनर मै छु नि भन्दा पनि नपुगेको ?
प्रधान न्यायाधीश कि प्रधान सेनापति
माओवादीले प्रधानन्यायाधीसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेछन्। अब प्रतिपक्षले प्रधान सेनापतिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार माग गर्ने कि ? त्यो नयाँ प्रस्ताव गर्ने जिम्मा नि केही दिनपछि प्रचण्डलाई नै दिने ?
सहयोगी खोज्दिन अनुरोध
'यहाँ म मौरी पालेर वर्षको १० लाख जति कमाउँछु। काम गर्ने सहयोगी छैन। छोरा वर्षको एक डेढ लाख लागि खाडी मुलुक जाँदैछ' पर्वतका किसानले Narayan Shrestha लाई भने‌, 'खान बस्न दिएर वर्षको एक लाख अहिले नै दिन्छु, सहयोगी आएर थप आम्दानी भए उनलाई एक लाख भन्दा धेरै दिउँला, लउन कोही काम गर्ने सहयोगी खोज्दिन सक्नुहुन्छ ?